PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-25 - UZUMA UBUYELA ENKANTOLO
UZUMA UBUYELA ENKANTOLO
Ilanga langeSonto - 2018-11-25 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE
KULINDELEKE ukuba kuqhume nhlamvana ezinye zifekele enkantolo enkulu yamajaji emgungundlovu ngolwesihlanu mhla zingama-30 kwephezulu, njengoba o wayengu me n g ame liwe zwe, umnu Jacob Zuma, ezobe evele khona ukuyozwa ukuthi umbuso uyaqhubeka yini nokuqulwa kwamacala okukhwabanisa athweswa wona noma ayahoxiswa.
Umnu Zuma wayevele mhla zingama-23 kuntulikazi (July) kule nkantolo, kwaba nokungcweka okunzima phakathi kwabameli bakhe nomshushisi kahulumeni, u-adv Billy Downer, bempheke ngobhojwana bethi ugxoba ngezinyawo amalungelo kamnu Zuma ngokubuyisa amacala ayekade echithwe yinkantolo eminyakeni eyi-13 eyadlula, nokuthi usengeza amanye amacala okudala ukuba kuhlehliswe ukulalelwa kwawo.
Kwavela futhi ukuthi u-adv Downer usakhuluma indaba yo- kuthi kusazoqoqwa obunye ubufakazi obusha ekubeni bekumele ngabe ufike enkantolo esevele ebuphethe.
Ukuhlehliswa kwecala kwavunywa yijaji umdumiseni Madondo emuva kokuba ummeli kamnu Zuma, u-adv Mike Hellens SC, enxuse ukuba athole ithuba elanele lokulandela okwakwenzekile ngaphambilini kummeli kamnu Zuma, umnu Michael Hulley.
Uma ngolwesihlanu abameli bakamnu Zuma bengaphumelela ekweneliseni inkantolo ukuthi amalungelo abammele anyatheliwe k ungezwa k ala isinqumo esingaba thokozisa.
Umsholozi uthweswe uhide lwamacala okuthiwa wawenza kudala e s e ngu ngqongqoshe wezomnotho Kwazulu-natal.
Umnu Zuma akayedwa kulawa macala njengoba kuthinteka nenkampani eyakha izikhali yaseFrance.
UMNU Jacob Zuma uzovela enkantolo enkulu yamajaji emgungundlovu.